I-Realme ithengise iifowuni ezizigidi eIndiya | I-Androidsis
Ababaninzi abayaziyo iRealme, inkampani eyenziweyo phantsi kweOppo esandula ukubhengeza inkululeko yayo kwi-Oppo ukuqhuba intengiso ngesantya sayo. Emva kwalo msitho, izinto zibonakala zimhambela kakuhle, kwaye emva kokuba izixhobo zakhe zombini zisunguliwe, iRealme 1 kunye ne2, ifikelele kwiyunithi yesigidi esithengiswe eIndiya, kwimarike apho isebenza khona ikakhulu.
Iiyunithi ezizigidi zee-smartphones ezithengisiweyo zibandakanya amanani athengisiweyo adibeneyo kwezi zimbini zichazwe ngasentla. Olu phuhliso luza nje kwiinyanga ezi-4 emva kokukhutshwa kweRealme 1 kwaye kwiiveki nje ezimbini ukusukela oko Realme 2 yaqala ukuthengiswa eIndiya.
Ngokwedatha eyahlukeneyo epapashwe ngaphambili, ngexesha lentengiso yokuqala yeRealme 2 eIndiya, inkampani ithengise iiyunithi ezingama-200.000 zale modeli kwimizuzu emi-5 nje kwiFlipkart. Kwiveki kamva, ngexesha lokuthengisa okwesibini kwangoko, uphawu lwaye lwathengisa iiyunithi ezingama-170.000, zizisa ukuthengisa kukaRealme 2 eIndiya kwiiyunithi ezingama-370.000.
Ukuphonononga ezinye zeenkcukacha zeRealme 1 ezibhengezwe ngoMeyi walo nyaka, siyabona ukuba Inesikrini esine-intshi ezi-6 esine-HDHD epheleleyo ngesisombululo sescreen seepikseli ezingama-2.160 x 1.080 kunye nomyinge wesikrini nomzimba we-84.75%. Ifowuni inikwe amandla yi-octa-core MediaTek Helio P60 SoC evalelwe kwi-2 GHz max. Iza kwiimodeli ezintathu ezisekwe kuqwalaselo lwenkumbulo: 3GB, 4GB, kunye ne-6GB ye-RAM. Imodeli ye-3GB ye-RAM iza ne-32GB yogcino lwangaphakathi, ngelixa imodeli ye-4GB ye-RAM ipakisha i-64GB yokugcina ebhodini. Umahluko ophambili ngakumbi, one-6GB ye-RAM, kubandakanya i-128GB yokugcina kwangaphakathi.
Ngakolunye uhlangothi, I-Realme 2 inesikrini esikhulu se-6.2-intshi ngeglasi yeCorning Gorilla, kodwa inkampani isinciphisile isisombululo sekhusi ukusuka kwi-FullHD + ukuya kwi-HD + ye-1.520 x 720 yeepikseli. Kwangelo xesha, inikwe amandla yiprosesa yeQualcomm's Snapdragon 450 evaliweyo kwi-1.8 GHz kwaye iza ngeendlela ezimbini: i-3 GB ye-RAM ene-32 GB yokugcinwa kwangaphakathi kunye ne-4 GB ye-RAM ene-64 GB yokugcina kwangaphakathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Realme ibhiyozela iiyunithi ezizigidi zeefowuni ezithengiswa eIndiya